Nceda Abagulayo Obathandayo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
“Xa utata wayeza kuphuma esibhedlele sacela ugqirha asicacisele ngeziphumo zokuhlolwa kwegazi lakhe. Wasiqinisekisa ukuba yonk’ into imi ngendlela, kodwa ke wazijonga. Wothuswa kukubona ukuba kwakukho undonakele kwezinye iziphumo! Waxolisa waza wabiza enye ingcali. Ngoku utata uphilile. Siyavuya kuba sabuza imibuzo.”—UMaribel.
Ngaphambi kokuya kwagqirha, bhala phantsi ukuba isigulana siva ntoni kunye namayeza esiwatyayo
Ukuya kwagqirha nokulala esibhedlele kungamenza axhalabe lowo ugulayo. Njengokuba sibona kumzekelo kaMaribel, umhlobo okanye isalamane singaba luncedo kakhulu, kangangokuba singasindisa nobomi. Ngaba ungamnceda umntu omthandayo?
Ngaphambi kokuya kwagqirha. Nceda isigulana sibhale phantsi ukuba siva ni, namayeza esiwatyayo. Bhala phantsi nemibuzo enifuna ukuyibuza ugqirha. Mncede umhlobo wakho akhumbule iinkcukacha ngesigulo sakhe, okanye abanye abantu abakhe baphathwa sisigulo esifanayo entsatsheni yakhe. Musa ukucinga ukuba ugqirha sele ezazi ezi nkcukacha okanye uza kuzibuza.
Mamela kakuhle, buza imibuzo ngembeko uze uzibhale phantsi iimpendulo
Xa nikwagqirha. Qiniseka ukuba wena nesigulana niziva kakuhle izinto ezithethwa ngugqirha. Buza imibuzo kodwa ungazenzi ngathi uyazi. Vumela isigulana sizibuzele imibuzo okanye sizithethele. Mamela kakuhle uze uzibhale phantsi ezinye izinto. Buza nangezinye iindlela zonyango. Ngamanye amaxesha, kuya kuba bubulumko ukucebisa isigulana ukuba sikhe sifumane noluvo lomnye ugqirha.
Phinda ujonge imiyalelo kagqirha namayeza ekufuneka siwathathile isigulana
Emva kokuba nibuyile kwagqirha. Phinda ujonge nesigulana izinto ebezithethwe ngugqirha. Qiniseka ukuba sifumana amayeza afanelekileyo. Sikhuthaze ukuba siwasele ngendlela ekuthiwe masiwasele ngayo, size simxelele kwangoko ugqirha xa sibona ukuba awasilungeli. Mncede lo mntu ugulayo ukuba ayijonge kakuhle imeko yakhe, aze enze nezinto ezingakumbi ekuthiwe azenze, njengokuphinda aye kuthatha amayeza xa ephelile. Mncede afunde ngakumbi ngemeko yakhe.
Qiniseka ukuba zonke iimpepha zizaliswe kakuhle
Zola uze uphaphe. Xa isigulana sisesibhedlele sisenokuziva sixhalabile ibe singenakuzenzela nto. Ukuzola nokuphapha kunokunceda wonk’ umntu azole kuze kuphetshwe iimpazamo. Qiniseka ukuba iimpepha zokwamkela umntu esibhedlele zizaliswe kakuhle. Hlonela ilungelo lesigulana lokuzenzela izigqibo ngonyango esilufunayo. Ukuba sigula kangangokuba asikwazi kwenza zigqibo, hlonela oko sasikubhale ngoxa sisaphilile, uze uhlonele igunya lesona salamane saso sisondeleyo okanye loo mntu usinyangayo. *
Ngembeko, chazela abasebenzi basesibhedlele izinto oziqaphela kuso
Zithathele ezandleni zakho ezinye izinto. Musa ukoyika ukuthetha. Ukubonakala uhloniphekile nokuba nembeko kungenza oogqirha oonesi basihoye ngakumbi isigulana sakho, baze basinyamekele kakuhle. Kwizibhedlele ezininzi, izigulana zibonwa ngoogqirha abahlukahlukeneyo. Ungabanceda ngokubaxelela oko kuye kwathethwa ngabanye abantu abazinyamekelayo. Wena usazi kakuhle isigulana, ngoko ke chaza izinto ozibonayo ezingaqhelekanga empilweni okanye engqondweni yaso.
Yenza konke onokukwenza kodwa ungabaphazamisi
Yiba nentlonelo nombulelo. Amaxesha amaninzi abasebenzi basesibhedlele basebenza kwiimeko ezicinezelayo. Baphathe ngendlela obungathanda ukuphathwa ngayo nawe. (Mateyu 7:12) Bahlonele kuba bawuqeqeshelwe ibe bayawazi umsebenzi wabo, bathembe ukuba bayakwazi ukuwenza futhi babonise ukuba uyakuxabisa ukuzinikela kwabo. Ukubaxabisa ngolo hlobo ungabakhuthaza bazilahlele nofele.
Akukho ndlela yokuphepha ukugula. Kodwa ngokuceba kwangaphambili nokubambisana, ungamnceda umhlobo okanye isalamane sakho sikwazi ukumela neemeko ezinzima.—IMizekeliso 17:17.
^ isiqe. 8 Imithetho malunga nokuhlonela ilungelo lesigulana noko simele sikwenze kuyehluka ngokweendawo ngeendawo. Qiniseka ukuba iimpepha ezichaza unyango olukhethwe sisigulana zizaliswe kakuhle ibe zisexesheni.